'Musliimni hiriyyummaaf wal hin argu, gaa'ila dhaabbata malee' - BBC News Afaan Oromoo
'Musliimni hiriyyummaaf wal hin argu, gaa'ila dhaabbata malee'
Goodayyaa suuraa Shaahzaad Younas osoo baankii keessa hojatu yaada hiriyoota musilimaa kalaqe
BBC'n torbeedhaan mata duree ittiin hoggantoota biizinasii addunyaa gutuu irraa ittiin keessummessu qaba.
Torbe kanaafis hundeessaa fi hojii gaggeessaa appii musilimtoonni ittiin wal beelaman (app dating fi app Muzmatch) kan ta'e Shaahzaad Younaas dubbiseera.
Shaahzaad Younas wayita waltajicha irratti haasa'u baayyee sodaataa fakkaata ture.
Lammiin Biritish kan ta'e kalaqaan kunis, wayita waggoota lama dura appii kana kalaqu dargaggeessaa waggaa 32 ture.
Yaada Muzmatch (hiriyyoota musilimtotaa) garee invastaroota baayyee seenaa olaanaa qabaniif kan dhiyeesse Saan Firaansiskoo keessatti ture.
Teessoo isaa kanas kutaa sanaaf yoo banu akkas jechuun ture: '''Muslimni hiriyyummaa qofaaf wal hinargu, nuti gaa'ila dhaabbanna malee.''
Goodayyaa suuraa Appichi amma addunyaa gutuutti biyyoota 90 oliin itti fayadamamaa jira
Shaahzaad fi hiriyaan daldalaa isaa Ryaan Broadie dorgommii addunyaa dhaabbata kabajamaa Invastimantii Silikon Vaalii'tti dhiyeeffataniif jecha waliiin achi ture.
Dhaabbanni Ameerikaa kunis waggaa waggaan kanneen waan haaraa eegalaniif deeggarsa maallaqaa fi kan ogummaa taasisa.
Kanneen 13,000 ol ta'aniif al tokkotti akka Muzmatch'tti kan iyyatan yoo ta'u, kanneen 800 keessaa tokko qofatu akka qaamaan yaada dhiyeessaniif affeerama.
Osoodhuma Shaahzaad haasa isaa taasisaa jiru attamiin akka dhugaa qabeessa ta'a jechuun invastaronni kolfaa turan.
Hindiin maaliif gatii daataa mobaayiilii rakasaa qabaachuu dandeesse?
Muzmatch battalumatti dolaara miliyoona 1.5 (paawondii miliyoona 1.2) kenne. Kunis pirojaktoota kanneen bara 2017'tti jalqabbii argatan 100 keessaa tokkoodha.
Har'a kubaaniyaan ariitiidhaan guddataa jiru kun akka jedhuutti, UK keessaa fi biyyoota biroo 90 keessatti fayyadamtoota galamaa'an miliyoona tokko oli qaba.
Goodayyaa suuraa UsFayyadamtoonni Muzmatch maatiin akka haasaa isaanii arganiif appichaan filachu ni danda'u
Isaan duras Magaalaa Landan keessa baankiif hojjataa ture. Hojii isaa baayyee jaalata ture. Garuu hawaasa Musilimaa hordoftoota amatiisaanii keessaa hiriyaa argachu barbaadaniif appiin tajaajila kennu danda'a akka hin jirre hubate.
''Tibba sanatti dhugumatti marsariitiiwwan ykn appiin haala aadaa keenyaatiin nu fayyadu danda'an hin turre,'' jedha Shaahzaad kan Maanchistar keessatti dhalachuun guddate.
''Hawaasa Musilimaa keessatti haadha warraa ykn abbaa warraa barbaachuuf baayyee 'matchmakers' tti fayyadamna, ammas fayadamaa jirra.
Yaandi Muzmatch isaa kunis haala dijitaala ta'een nama kan itti heerumuu ykn fuudhu barbaadu akka fayyaduuf kan hojjatameedha.
Booda bara 2013 keessa akka carraa wayita hojiirraa hir'ifamuu hojii appii cimsee itti fufe.
Goodayyaa suuraa Hiriyaan bizinasii Shaahzaad, Ryaan Brodie akka appicha irra deebiin tolchuuf gargaareera
"Yeoo hunda ganama sa'aa 12 irriibaa ka'uun alkan ammoo sa'aa 8tti gara irriibaa deebii'an ture,'' jedha. '' Kanan hojjachaa turees mana koo keessa kutaa cisichaa kiyyatti ture. Innis walitti kan fufee ture. Attamiin akka appiin lafaa ka'amee kalaqamu barachuun qaba ture.''
"Garuu akka hojachuu qabu taasisuun akkan danda'u nan beekan ture. Carraanis baayyee olaanaadha. Addunyaa gutuutti hordoftooti Isilaamaa biliyoona 1.8 ta'aniitu jira. Isaan kan tajaajilu kan biraa akka hinjirre ifaadha.''
Shaahzaad bara 2014'tti beeksiisa appichaa salphaa taasise. Haalli tarsiimoo beeksiisaa isaas kan appiiwwan beelamaa guddichaan adda ture.
"Kadhannaa Jumaatiin booda yeroo hunda guyyaa Jimaaataa gara masjiida guddaa deemuun kaardii appiichaan hira,'' jedha. Sirna maatii musiliimaa wayis hindeemu, akkan achi turu waanan beekufuu.''
Bizinasiin qofaa ofiitti yoo guddatu arguun rakkisaa waan ta'eef, jalqabarratti Shaahzaad halli itti cime ture.
Goodayyaa suuraa Appichi fayyadamtoonni akka attam amntoota ta'usaanii akka caqasaniilleen ni dandeessisa
"Baatiiwwan jalaqaatiif attamiin akka hojjataa jiruufi namoonni meeqa akka fayadamaa jiran hordofuuf 'Google Analytics' hordofaan ture,'' jedha.
Yeroo tokko yoo ilaallu namoonni 10 Muzmatch fayyadamaa jiru arge.
Garuu waljalaan lakkoofsi fayyadamtootaa gara kumaatamaatti guddachuun galateefachu eegalan. Boodas attaniim akka haadha warraa isaanii ykn abbaa warraa isaanii itti argatan Shaahzaad tti himuu eegalan namoonni.
"Jalqaba akkuman odeessa gaafii dhagaheen akkan dhugaa ta'uun natti dhaga'amu na taasisee.'' Achumaanis appichi gara gaariitti adeemaa jiraachuu isaa na keessatti amantaa umee.''
Hiriyaan daldalaa isaa Ryan kan umuriin waggaa 25 ammoo bara 2015tti hojiicha eegale.
Isa waliin ta'uun ture kan irra deebiin appii Muzmatch haaluma yaada maamitoota isaanii irraa argataniitti kan fooyyeessan hojjatan.
Isaanis gaaffiiwan namoonni gaafatan 22, kan akka amantaa namtichaa, fi hangam akka kadhannaa taasisan fi dhimmoota dhugaatti fayadamtootaaf fayyadan kan hammateedha.
Muzmatch akka suuraaa pirofaayiilii akka qabaatan osoo hin taane akka duummessan gaafata. Akkasumas akka ergaan isaanii waliin haasa'anii nama waliin haasa'aa jiranii ykn maatii bira dhaquuf 'tick' gochu qabu.
Ryan osoo hordofaa amantaa Islaamaa hin ta'iin garuu waan appichi hojjatu sirrin akka hubate Shahzaad ni hima.
Goodayyaa suuraa Amma kubaaniyichi Baangilaadish biyya ummata musilimni itti baayyatu keessatti waajira lammaffaa saaqate.
Kubaaniyichis waggaan galiinsaa paawundii miliyoona 4.5 ol akka gahe hima.
Akkuma appichi fudhatamaa argataa adeemuun ammoo, baayinni fayadamtootaa musilimoota gaa'ila hin dhaabatiin gara miliyoona 400tti tilmaamamanii gahu akka malu hima.
''Amma galanni Muzmatch'f haa ta'uutii gaa'iilawwan fi ijoollee kumaatamaa arganneera,'' jedha. ''Guyyaa hunda waa'ee isaanii yaaduun akka waan hojii cimaan jalqabarratti hojjataa ture sun hundi kanuma ta'u qabu ta'e natti dhagahama,'' jedha kalaqan kun.
Daataa Mobaayilaa: Hindiin addunyaarratti gatii rakasaa maaliif qabaachuu dandeesse?